Ny fampiasana tsara indrindra ho an'ny rambony
Ny faritra miafina dia heverina ho tena olana eo amin'ny firaisana ara-drariny, satria izy io dia heverina ho marim-pototra ho an'ny fahasarotana. Ankoatr'izay, ny hozatry ny gluteus dia lehibe, ka mahatonga azy ireo ho tony sy hahazoana fanampiana tsara dia tsy mora. Amin'ity tranga ity, ny fanampiana tsara indrindra ho an'ny akanjon'ady dia hanampy, izay tsy maintsy atao matetika, ary ny tena zava-dehibe, marina. Mba hahazoana vokatra tsara dia tsy ampy ny fiofanana, satria ilaina ny mifantoka amin'ny sakafo mahasalama .
Andeha isika hanomboka amin'ny fitsipika sasantsasany izay tokony hodinihina mba hahatonga ny fiofanana ho mahomby araka izay azo atao:
Ilaina ny milalao fanatanjahan-tena tsy tapaka, izany hoe intelo isan-kerinandro. Zava-dehibe ny manamarika fa ny entana isan-karazany dia tsy azo tsinontsinoavina, satria ny fibra ny muscle dia mila fotoana ahafahana manasitrana tanteraka, ka tokony hisy andro iray mampiato ny fiofanana.
Tokony hampitombo tsikelikely ny fandefasana azy, mba hahafahana mampiasa ny hozatra. Raha tsy misy io fandrosoana io dia tsy afaka miandry ianao. Ampitomboy ny enta-mavesatra amin'ny fampitomboana ny isan'ny famerimberenana na amin'ny fampiasana lanja fanampiny.
Ny fikarakarana ny fomba tsara indrindra ho an'ny akanjo ho an'ny vehivavy, aoka ho azo antoka ny hitadidy ny fialana voka-tsoa, ​​noho izany dia natao ny fientanam-po sy ny fialan-tsasatra - amin'ny fitaomam-panahy. Raha tsy manaraka ny fitsipiky ny fofona ianao , dia tsy hisy hilana ny fiofanana.
Ny tsara indrindra dia ny mampifandray ny entana sy ny enta-mavesatra, izay hanaisotra selulit, hampihenana ny volombava sy ny hozatra.
Amin'izao fotoana izao dia hijery haingana ny fomba fampiasana tsara indrindra isika, satria io no fahalalana momba ny teknika izay ahafahantsika mahazo vokatra tsara.
Squats . Ity no fanazaran-tena fototra fototra, izay azo antoka fa tokony hampidirina amin'ny fiofanana mba hanodinana ny rambony. Ny tsara indrindra dia ny manatanteraka izany amin'ny lanja fanampiny, amin'ity tranga ity miaraka amin'ny horonam-peo, izay tsy maintsy raisina amin'ny tanana roa. Arovy amin'ny tongotra ny tongotrao. Mialà sasatra, mamerina ny lakolosy ary avereno izy mandra-pahatongan'ny feny mifanaraka amin'ny tany. Ataovy azo antoka fa tsy handalo ny kiraro ny lohalinao. Aorian'izany dia mijoro tsikelikely, saingy tsara kokoa ny tsy manongotra ny lohalika, mitazona ny entana. Safidy iray hafa - toso sito. Ny fahasamihafana dia ny hametrahana ny ranjony ho mafy kokoa noho ny soroka sy ny sombintsombiny mipetaka ivelany.
Makhi tongotra . Mba hanatanterahana io fanatanjahan-tena io, dia mijoro eo amin'ny voditongotra rehetra, mametraka ny tanana eo amin'ny sakan'ny soroka. Raiso ny tongotrao, tanteraho ny pikantsary ary asandrato avo araka izay azo atao, miezaka ny manatratra ny valindrihana amin'ny voditongotra. Miverina tsikelikely any amin'ny toerana voalohany. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny tselatra sy ny tavy dia tsy manongana, ary ny vatana dia mitoetra tsy misy fihetseham-po mba tsy hahavery ny enta-mavesatra. Ataovy izany fampiasana tsara indrindra ho an'ny akanjonao ao an-trano voalohany, ary avy eo ny tongotra hafa.
Fanafihana mihetsiketsika . Ity fanazaran-tena ity dia manome vesatra tsara eo amin'ny rambony sy ny andilany. Mba hanatanterahana izany dia mila horokamo ianao. Mitsangàna mahitsy, mametraha tanana amin'ny sakan'ny soroka. Mitsangàna, manaova fihinanan-kena, ary asio tongotra indray ny diany. Mianjera eo alohan'ny hikirak'ilay tongony eo anoloana dia mifanaraka amin'ny tany. Rehefa atody dia miverina amin'ny toerana voalohany.
Deadlift . Ny lisitr'ireo fampiasana tsara indrindra ho an'ny fihenam-bolo dia tsy afaka miditra ao amin'ny efitrano sy ao an-trano. Manaova sarim-boninkazo miaraka amin'ny hidy mahitsy ary apetaho ny elatrao amin'ny elany. Mitandrema, atsangano ny felana, ary miandrandra. Ny soso-kevitra dia ny hanery kely ny lohalika. Atsaharo ny vatana, ary andao indray hiverina, mitarika ny valiny indray. Ataovy ao anaty haingana ny zava-drehetra, miezaka ny mangeja ny hozatrao.
Ahoana no hikolokolo azy?
Ahoana ny fananganana ny tongotry ny ankizivavy iray?
Fanatanjahantena ho an'ny fanamafisana ny nono
Manaova fanatanjahan-tena miaraka amin'ny tànana
Volombava mavesatra mandritra ny 10 minitra
Furacilin ho an'ny eyewash
Sakafo "7 andro 10 kg"
Pita mofo miaraka amin'ny cheese - fomba tsara indrindra ho an'ny sakafo mahavelona
Tsy mila ny vadiko aho - inona no tokony ataoko?
Spasmolytics - lisitry ny zava-mahadomelina
Fanafody antiviral manohitra ny gripan-kisoa ho an'ny ankizy
Mpintisa eo am-baravarana
Ny modely ambony indrindra
Manangona tanana avy amin'ny fitaovana manaparitaka
Frosted polish polish
Adriana Lima dia nanisy peratra fifaliana